Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » I-Uganda Hydro Dams: Ukufikelela kuKhenketho olutsha
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda • Iindaba ezahlukeneyo
IBhodi yezoKhenketho yaseUganda (i-UTB) yenze isivumelwano kunye necandelo lezamandla kwiinzame zokwahlula imveliso yezokhenketho eUganda ngaphaya kolawulo lwezilwanyana zasendle ngokusayina iMemorandam yokuQondana (MOU) kunye neUganda Electricity Generation Company Limited (UEGCL) ukuthengisa i-600MW yeDama laMandla eKaruma kunye ne-183MW Isimba Hydro Power Dams njengeemveliso zezokhenketho.
I-UTB kukunceda i-UEGL ukupakisha kunye nokwenza urhwebo ngeeprojekthi ezahlukeneyo ezicwangcisiweyo kunye nemisebenzi kumadama ombane.
Imisebenzi yezokhenketho kunye neemveliso eziza kubandakanywa kukhenketho lwezityalo, ukuhamba ngenqanawa, ukuloba kwezemidlalo, izibonelelo zokwamkela iindwendwe, kunye nezikhumbuzo.
I-MOU ityikitye nge-7 kaSeptemba, 2021, Isimba Dam ixhasa ukuqhuba kwe-UEGCL yokusebenzisa iiasethi zayo ukwahlula phakathi ipotifoliyo yeshishini kunye nokunyusa uzinzo njengenkxalabo ekhulayo.
“Oku kubonisa ukuqala kohambo olubalulekileyo eUganda. Xa kuziswa kwiziqhamo, ukukhula ngempumelelo kwe Iprojekthi yamandla eKaruma Hydro kunye neProjekthi yaMandla oMbane ye-Isimba kwiisayithi zokhenketho ziya kuthi gqolo zenze iyantlukwano kwipotfoliyo yethu yezokhenketho kwaye, ke, kube negalelo kwiinjongo zethu ezingundoqo ezizezi, ukonyusa ngokuzinzileyo umthamo (amanani) kunye nexabiso (lemivuzo) lezokhenketho eUganda nangokwandisa, amakhaya aseUganda kunye neendlela zokuphila ukudalwa kwemisebenzi kunye nokunyusa irhafu, ”utshilo u-Lilly Ajarova, i-CEO yeBhodi yezoKhenketho e-Uganda, kusayino. Ubulele abaphathi be-UEGCL ngokukhetha umdla kwezokhenketho nangokufikelela kwi-UTB ukwenza obu budlelwane bongeza ixabiso.
“Ukwahluka nokwazisa ngeemveliso zokhenketho ngaphaya kwezokhenketho lwezilwanyana zasendle ukubandakanya phakathi kwezinye, ezenkolo, ezenkcubeko, ezokupheka (ukutya) kunye nezokhenketho ngoku, kubaluleke kakhulu kuthi njengecandelo kwaye ngokuqinisekileyo njenge-UTB. Yiyo loo nto, kwiSicwangciso-qhinga sethu se-2020 / 21-2024 / 25, i-UTB ibeke phambili ukusebenzisana nabanini beendawo zokhenketho, icandelo labucala namanye amaSebe oMphathiswa neearhente ukuphuhlisa kunye nokupakisha iimveliso zokhenketho ezahlukeneyo ukwandisa ixesha lokuhlala kwindawo ekuyiwa kuyo. , ngaloo ndlela inyusa ingeniso yokhenketho, ”utshilo u-Ajarova, ngakumbi kwimarike yasekhaya.
UGqr Eng. U-Harrison Mutikanga, othethelela i-UEGCL, uthe i-MOU ihambelana nesiCwangciso seQhinga seminyaka emihlanu se-UEGCL (2018 -2023) esithi phakathi kwezinye, sigxile kwinjongo ephambili yokuphucula isikhundla sayo seshishini.
Ucacisile ukuba ukusetyenziswa kweasethi enkulu yombane njengemveliso yezokhenketho kuya kunceda kakhulu ekuvuleni iziseko zophuhliso amandla okhenketho eUganda. Oku kuxhomekeke kwinto yokuba izitishi zombane ezineempawu ezizodwa ngaphezulu nasemhlabeni. "Njenge-UEGCL, sithembisa ukuzibophelela ngokupheleleyo kubambiswano," utshilo uMutikanga.
Ukhenketho kwiindawo zamandla ombane asinto intsha njengoko oku kubonisiwe kwisiza samandla ombane i-Three Gorges e-China, indawo yase-Livingstone e-Zambia, kunye ne-Niagara Falls hydropower site e-Canada.
Ubudlelwane phakathi kwala macandelo mabini, nangona kunjalo, abuzange buhle kule minyaka ilishumi yokuqala yenkulungwane yama-21, xa uRhulumente wase-Uganda waqalisa iphulo elinamandla lokonyusa amandla ombane wamandla nelizwe kulandela ukusilela ukuhlangabezana neemfuno amashishini kunye nokwanda kwabantu. Oku kuza ngexabiso eliphezulu kwishishini lezokhenketho njengoko iisayithi zomfanekiso omfula kumNayile odumileyo kumgangatho we-rafting kunye ne-kayaking zenziwa amadini egameni lophuhliso.
Ngo-2007, iBhanki yeHlabathi yayixhase ngemali iprojekthi ye-Hydropower ye-Bujagali, ibangela ukunyamalala kwe-rapids yokuqala ye-grade 5 eBujagali ukuwa kunye nokufudusa i-Oracle yemveli ye-Falls, uNabamba Budhagali.
Indawo yaseKalagala Offset yadalwa, phakathi koMbutho woPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe (iBhanki yeHlabathi) kunye noRhulumente waseUganda. Isivumelwano senziwe ukunciphisa umonakalo obangelwe lidama laseBujagali kwaye sachaza ukuba indawo ebekelwe bucala ayinakugutyungelwa yenye iprojekthi ye-hydro. Nangona kunjalo, ngo-2013 urhulumente wafumana inkxaso-mali eyongezelelweyo kwi-Exim Bank yase-China yokugqibezela ukwakhiwa kwedama le-570 yezigidi, echitha isivumelwano.
Kuyavunywa, ukuveliswa kwamandla bekuyimfuneko kuphuhliso nakwimizi-mveliso yelizwe, nangona iindleko nge-0.191 iisenti kwiyunithi enye isala ingaphantsi kofikelelo kwilali yaseUganda, xa ucinga ukuba umthwalo wawudluliselwe kumakhaya. Eyona nto ibisomeleza uluntu kukuba ibhulorho yaseIsimba, eyakhiwe ngenxa yedama, inciphise ukuhamba phakathi kwezithili zaseKayunga naseKamuli, ithathe indawo yesikhephe semoto esingathembekanga kwaye yonyusa urhwebo nokhenketho.
Emazantsi omlambo, iDama le-Isimba elisandula ukuthunyelwa kwi-Nile lihlala lidumile kukhuphiswano lwamanzi amhlophe kunye nokhuphiswano olukumgangatho wehlabathi kubandakanya iNile Freestyle Festival etsala ubuhlobo be-kayaking obuvela e-USA, eRashiya, nase Mzantsi Melika nase Europe, uninzi lwabo luye lwaqeqeshwa kumNayile kulungiselelwa ukhuphiswano lwehlabathi lokumisa amanzi amhlophe.
Usihlalo weBhodi ye-UTB oHloniphekileyo uDaudi Migereko, owayenomdla njengo-Mphathiswa wezaMandla ekuphakameni kwedama ngo-2006, wathi xa etyikitya ukuba i-MOU iyinxalenye ye-UTB ye-ajenda yentsebenziswano ne-arhente eziphambili zikarhulumente, ezabucala nezingajonganga nzuzo nemibutho Umsebenzi unefuthe ngqo kwezokhenketho.
Ngowama-2019, urhulumente uzirhwebesele izicwangciso zokugweba isifundo sokwakha idama elingama-360-megawatt eMurchison Falls National Park ngoM / S Bonang Energy and Power Ltd. ovela kwiRiphabliki yoMzantsi Afrika naseNarconsult kunye neJSC Institute Hydro Project, kuphela kukubhabha phantsi koxinzelelo oluvela kuMbutho waseUganda abakhenkethi (i-AUTO) kunye noMbutho woLuntu.
Ndiyathemba ukuba, oonozakuzaku be-UTB kunye necandelo lezamandla baya kuhlawula, kwaye isivumelwano esingaxakekanga siya kuhlala; umzila wephepha uthetha ngenye indlela.